၁၄ရာစုနှစ်အလယ် ယူရေးရှား(အာရှနှင့်ဥရောပ)တိုက်နှင့် အာဖရိကမြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားသော ကပ်
↑ Jay, Peter (17 July 2000). "A Distant Mirror" 156 (3). Retrieved on 25 January 2018.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဲသေရောဂါ&oldid=398023" မှ ရယူရန်
၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၂:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၂:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။